ब्रोकर लाईसेन्सको संख्या बढाएपछि शेयरबजार थप चलायमान हुन्छ - नेपालबहस
बोरे प्रवृतिलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नको लागि र इ–केवाईसी लागु गर्न सीडीएससीलाई भनेका छौ
| २१:३५:५१ मा प्रकाशित
भीष्मराज ढुंगाना नेपाल धितोपत्र बोर्डकाे अध्यक्ष भएको एकबर्ष पुरा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सेवानिवृत्त भएपछि उनी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । अध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघि ढुंगाना केही महिना बोर्डमै विज्ञ सञ्चालकको रुपमा कार्यरत थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवाअवधि पुरा गरेका ढुंगानाले कुशल बैंकरको छवि बनाएका छन्।
सिर्जनात्मक सोचका खानी ढुंगाना नियुक्त भएर आएपछि धितोपत्र बजारले उनीसँग धेरै अपेक्षा गरेको थियो । आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाउनु पर्छ तथा परिणात्मक रिजल्ट आउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका उनले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्दै तीव्रगतिमा स्टेकहोल्डरहरुले गरेको अपेक्षा भन्दा धेरै काम गर्न भ्याईसकेका छन् ।
यही सन्दर्भमा धितोपत्र बजारमा एकबर्षको अवधिमा सम्पन्न गरेका काम, आगामी लक्ष्य, कार्यदिशा र धितोपत्र बोर्डले बजारको विकासका लागि चालेका कदमका विषयमा बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानासँग नेपालबहस डटकमले गरेकाे कुराकानी प्रस्तुत छ ।
नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका रुपमा तपाईको एकवर्ष पुरा भएको छ । दोस्रो बजार सुधार र व्यवस्थापनको लागि यहाँले के कस्ता कार्यहरु गरिरहनु भएको छ ?
– एक वर्षको अवधिमा हामीले खासगरी बजारको व्यवस्थित विकास गर्ने, लगानीकर्ताको (कन्फिडेन्ट) विश्वास बढाउने तथा विभिन्न नीति निर्माणका कामहरु भएका छन् । सिस्टमलाई इन्डोरमेन्ट गर्ने काम भएको छ । प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारको विकासको समायानुकुल सुधार गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो । यस सम्बन्धमा यहाँहरुले सरसर्ती हेर्नु भो भने बजारमा धेरै सुधार र विकास भएको छ ।
बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा गणनायोग्य काम के के भए त ?
– म नियुक्त भएर आउने बेलामा नै भनेको थिएँ कि मैले अनलाईन सिस्टमलाई फोकसलाईज गर्छु । संस्थागत विकास गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, बजारको दायरा बढाउने र कानुनी सुधारका कामहरु भएका छन् । पछिल्लो समय बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताको उत्साहजनक सहभागिता असाध्यै बढेको छ । यसको पुष्टि डिम्याट खाता खुलेको संख्या हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । गत पुष मसान्तमा करिब १६ लाख डिम्याट खाता थिए भने यो एकवर्षको अन्तरालमा डिम्याट खाता १० लाखले बढेर करिब २६ लाख पुगेको छ ।
त्यसैगरी प्राथमिक निष्काशन अनलाइन भर्नको लागि मेरो शेयर खाता खोल्नुपर्छ । गत पुष मसान्तमा मेरो शेयर लिनेको संख्या छ लाख हाराहारी थिए भने एक वर्षको अन्तरालमा यो पनि १० लाखले बढेर १६ लाख पुगेको छ । यसरी लगानीकर्ताको संख्या शतप्रतिशत भन्दा ज्यादाले बढेर गएको छ ।
त्यसैगरी गत सालसम्म कुनै एउटा कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्काशन भयो भने मुस्किलले तीनदेखि चार लाख मान्छेले भाग लिन्थे । तर, पछिल्लो समय चन्द्रागिरी हिल्सको आईपीओ खुल्दा १० लाख बढीले आवेदन दिए । त्यो संख्या निफ्राको आईपीओ भर्ने बेलासम्म १५ लाख हुन पुग्यो । प्राथमिक बजारमा मानिसहरुको सहभागिता असाध्यै राम्रो छ ।
यस्ता कुराले अहिले बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढायो । अहिले औसतमा ७ लाख मानिसहरु सक्रिय भएर लागेका छन् । लगभग ५०–६० हजार मानिसले दैनिक शेयर कारोबार गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणको सहभागितालाई बजारमा बढाउने काम हामीले गरेका छौँ ।
अनलाइन सिस्टमलाई थप सहज बनाउने सम्बन्धमा अरु के कस्ता प्रयासहरु हुँदैछन् ?
– अनलाईन सिस्टम नभएकै कारण गत चैतदेखि असारसम्म बजार पुरै बन्द भयो । हामीले कोरोनाको समयमा बजार बन्द गर्नुपर्यो ।कोरोनाको समयमा पनि अनलाइन सिस्टम भएका अन्य मुलुकमा शेयरबजार बन्द भएनन् । अमेरिका र युरोपको शेयरबजार कोरोनाको समयमा पनि कुनै दिन बन्द भएनन् ।
अनलाइन सिस्टम चलेका मुलुकमा कोरोनाको बहानाले शेयरबजार बन्द भएन । तर, हाम्रो देशमा भने शेयर खरिदविक्रीका लागि ब्रोकरको कार्यालय नै जानुपर्ने, चेक नै काटेर खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने, शेयरको पनि चेक नै काटेर जम्मा खर्च गर्नुपर्ने, ब्रोकरकहाँ मार्जिन राख्नु पर्ने र मार्जिन राखेको पैसा फिर्ता नै नआउने, ब्रोकर कहाँ धाउनु पर्ने जस्ता विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटहरु हामीकहाँ थिए । यस्ता प्रक्रियागत झन्झटहरुलाई हामीहरुले एक वर्षको अवधिमा अनलाइन प्रणालीमा ढाल्ने काम गरेका छौँ, सुधार गर्ने काम गरेका छौँ ।
हामीले नगद र चेक कारोबारलाई कनेट आईपीएसमार्फत हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यसैगरी शेयर बेच्दा चेक काट्नु पर्ने प्रक्रियालाई ईडीआईएसमार्फत हुने बनाएका छौं । लगानीकर्ताले शेयरको मुल्य हाल्दा जुन औसत मुल्य हाल्नु पर्ने हो, त्यसका लागि ब्रोकर कार्यालय जानुपर्ने र भेरिफाई गर्ने अवस्था थियो । त्यसलाई हामीले कस्टुमरले पोष्टिङ गरिसेकपछि त्यसैको फाईल ट्रान्सफर गरेर त्यहीँ नै एजिक्युट हुने व्यवस्था गरेका छौं । हामीले पद्दतिको पनि विकास गरेका छौं ।
दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नका लागि हामीले धेरै कुरा सहज गरिसकेका छौ । रकम ट्रान्सफरको व्यवस्था, शेयर ट्रान्सफरको व्यवस्था र कारोबार गर्ने व्यवस्था हामीले इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट नै हुने बनाइसकेका छौँ । जसले गर्दा एकवर्षभरिमा बजार पुँजीकरण १६ खर्बबाट दोब्बर भन्दा बढेर ३४ खर्ब नाघिसकेको छ ।
त्यसैगरी ब्रोकरकहाँ मार्जिन राख्न मानिसहरु डराउँथे । मार्जिनवापत ब्रोकरले ब्याज दिन्छ नडराउ भनेर हामीले सिस्टमेटिक बनाइसकेका छौं । त्यसैगरी पूँजीगत लाभकरको मनोवैज्ञानिक डर थियो । त्यो कुरामा पनि हामीले काम गरी यो विषय किनारा लगाइसकेका छौँ । यस्ता कुराले अहिले बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढायो । अहिले औसतमा ७ लाख मानिसहरु सक्रिय भएर लागेका छन् । लगभग ५०–६० हजार मानिसले दैनिक शेयर कारोबार गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणको सहभागितालाई बजारमा बढाउने काम हामीले गरेका छौँ ।
अहिले प्राथमिक बजारको अवस्था कस्तो छ ?
माथि उल्लेख गरेका सबै काम गरिसकेपछि प्राथमिक बजारको अवस्था पनि असाध्यै राम्रो छ । गतवर्ष यसै अवधिमा करिब साढे तीन अर्बको प्राथमिक शेयर निष्काशन भएको थियो । एकवर्षपछि अहिले तीन गुणाले आईपीओ निष्काशन बढेर अहिले करिब साढे १० अर्बको शेयर निष्काशन भएको छ । कर्पोरेट बन्डहरुको निष्काशन पोहोरको तुलनामा ४८ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यसैगरी मिच्युअल फण्डको लागि हामीले नयाँ स्कीमहरु ल्याएका छौं । पहिला क्लोजबीन मात्रै थियो । अहिले हामीले क्लोजबिन ओपनबिन दुवै स्किमहरु ल्याएका छौँ । पछिल्लो ६ महिनामा १ अर्ब ५० करोडको निष्काशन भइसकेको छ । प्राथमिक बजारको अवस्था राम्रो छ ।नेपालका ७७ वटै जिल्लाबाट मोवाईल, ल्यापटप, कम्युटरको सहायताले शेयर निष्काशन भएपछि मेरो शेयरमार्फत आवेदनमा भाग लिन पाइन्छ ।
दोस्रो बजारका लागि के हुँदैछ ?
– अब दोस्रो बजारको लागि पनि हामी काम गरिरहेका छौ । जसरी प्राथमिक निष्काशनको लागि मेरो शेयरको एप्स मोवाईलमा डाउनलोड गरेर कारोबार गर्न सकिन्छ त्यसैगरी दोस्रो बजारमा शेयर खरिदविक्रीको लागि पनि एप्स बनाउने काम भइरहेको छ । यसका लागि ब्रोकरहरुले आफ्नो टीएमएस सुधार गरेर टीएमएसबाट नै कारोबार गर्न दिनुपर्ने हो । तर यो प्रक्रियामा नै छ, काम सकिएको छैन ।
तर, पनि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नका लागि हामीले धेरै कुरा सहज गरिसकेका छौ । रकम ट्रान्सफरको व्यवस्था, शेयर ट्रान्सफरको व्यवस्था र कारोबार गर्ने व्यवस्था हामीले इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट नै हुने बनाइसकेका छौँ । जसले गर्दा एकवर्षभरिमा बजार पुँजीकरण १६ खर्बबाट दोब्बर भन्दा बढेर ३४ खर्ब नाघिसकेको छ ।
अनलाइन सिस्टम त बनाउनु भयो तर सिस्टममा झन् दिनै पिच्छे समस्या पो देखिएको छ त ? अडर्र गर्दा पहिला नदेखिने तर पछि दोब्बर-तेब्बर अडर्रहरु देखिने गुनासो सुनिन्छ ।
– अनलाईन सिस्टममा समस्या नै छैन भनेर मैले भनेको छैन् । तर, देखिएका समस्याहरुलाई हल गर्ने कार्यमा हामी लागेका छौं्र । पहिलाको जस्तो धेरै मेजर समस्या केही छैन । केही सामान्य समस्याहरु देखिएका हुन् ।
अहिले धेरै जसो समस्या नेप्सेको टीएमएस र ब्रोकरको टीएमएसमा देखिएको छ । समस्या देखिएपछि हामीले ब्रोकरहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिस्टम ल्याएर काम गर्नका लागि भनिसकेका छौं । नेप्सेको सिस्टमलाई पनि बढाउन र मजबुत बनाउन भनिसकेका छौं । सीडीएससीले त टेण्डर बिडिङ गरेर आफ्नो भेन्डरलाई अपग्रेडको लागि भनिसकेको छ ।
सबैभन्दा बढी समस्या त नेप्सेमा देखिएको लगानीकर्ताको भनाई छ ?
– नेप्सेमा अलि बढी नै समस्या छ । नेप्से र सीडीएसका प्राविधिक समस्या सुधारका लागि हामीले निर्देशन दिईसकेका छौँ । सुधारको काम भइरहेको छ ।
पहिलो कुरा ब्रोकरसँग भएको टीएमएस नेप्सेले दिने होइन । ब्रोकर आफैँले संचालन गर्नुपर्ने हो । नेप्सेले गर्ने भनेको अनलाइन सिस्टमलाई बढाउने र म्यापिङ सिस्टम राम्रो बनाउने हो । नेप्सेले ब्रोकरलाई दिने भनेको एपीआई मात्रै हो । नेप्सेसँगको कनेक्सन मात्रै ब्रोकरले लिने हो । सीडीएससँग पनि कनेक्सन मात्रै लिने हो । यसपछि रियलटाइममा के कारोवार भएको छ र शेयर कारोवारको यथार्थ स्थिति थाहा हुन्छ ।
टीएमएस सिस्टमकै कुरा गर्दा लगानीकर्तालाई शेयर खरिदबिक्री गर्न ब्रोकरले जुन लिमिट दिएको हुन्छ । अब त्यसको सट्टा खरिदकर्ताको बैंक खातासँग ब्रोकरको खातालाई इन्टिग्रेशन गरिदियो भने झन् सजिलो होला नि ? यतातर्फ धितोपत्र बोर्डले के सोचेको छ ?
– हामीसँग जम्मा तीनवटा सिस्टम संचालनमा छन् । नेप्सेसँग अनलाइन भन्ने हुन्छ । त्यो अनलाईन भित्र कारोबार गराउने र कारोबारलाई म्याच गराउनका लागि म्याचिङ इन्जिन हुन्छ । यो चलाउने काम नेप्सेको हो ।
अर्को भनेको युजर आईडी, पासवर्डदेखि कारोबार सुरु गर्ने, गराउने, मार्जिन लिने, कारोबारको हरहिसाब मिलाउने काम ब्रोकरको हो ।जसलाई टीएमएस भनिन्छ । टीएमएस भित्र पनि टीएमएस र आरएमएस भन्ने हुन्छ । यसको संचालन गर्ने काम ब्रोकरहरुले गर्छन् । त्यसपछि डीपी र क्लियरिङको कुरा आउँछ । डीपीको काम मर्चेन्ट बैंकले गर्ने गरेका छन् । क्लियरीङको काम सीडीएससीले गर्छ । यो तीन वटै सिस्टम सक्रिय भएपछि मात्रै शेयरको कारोबार हुन्छ ।
दाेस्रो बजारको भविष्य असाध्यै राम्रो छ । बजार पुँजीकरण पोहोर सालको १६ खर्बबाट अहिले ३४ खर्ब नघिसक्यो । त्यसैगरी नेप्से १२६३ बाट नेप्सेले २५०० नाघिसकेको छ । जीडीपीको आधारमा पोहोर साल बजार पुँजीकरण ४२ प्रतिशत मात्रै थियो अहिले बढेर ८२ प्रतिशत भएको छ । दिनभरिमा पोहोर साल यसै समयमा दैनिक ३९ करोडदेखि ४५ करोडको कारोबार हुने गर्दथ्यो । तर अहिले औसतमा दैनिक १० अर्बको कारोबार भइरहेको छ । बजारमा पटकपटक सर्किट ब्रेक लागेको छ ।
अहिले धेरै जसो समस्या नेप्सेको टीएमएस र ब्रोकरको टीएमएसमा देखिएको छ । समस्या देखिएपछि हामीले ब्रोकरहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिस्टम ल्याएर काम गर्नका लागि भनिसकेका छौं । नेप्सेको सिस्टमलाई पनि बढाउन र मजबुत बनाउन भनिसकेका छौं । सीडीएससीले त टेण्डर बिडिङ गरेर आफ्नो भेन्डरलाई अपग्रेडको लागि भनिसकेको छ । अन्य निकायले पनि काम जारी राखेका छन् ।
खरिद–बिक्रीकर्ताको खातालाई बैंकसँग लिंक गराएर अटोमेटीक कारोबार गराउन सकिँदैन र ?
टीएमएसले गर्नुपर्ने काम भनेको हाम्रा लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा कारोबारको लागि एप्स दिने । जसरी प्राथमिक बजारको शेयर निष्काशनपछि भर्न मेरो शेयर भन्ने एप्स छ त्यस्तै दोस्रो बजारको पनि एप्स बनाउने । त्यही टीएमएस एप्सबाट अनलाईन कारोबार गर्ने बनाउने, स्टाटस् र मार्जिन एकाउन्ट मेन्टेन गर्ने, आवश्यक पर्ने थप रकम उपलब्ध गराउने, बैंकसँग इन्ट्रीगेशन गर्ने, डीपी र सेटलमेन्टसँग इन्ट्रिगेट गराउने । यो सबै काम टीएमएसको हुन्छ । यो टीएमएसमा स्तरोन्नति हुने बितिक्कै र ब्रोकरले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टीएमएस सिस्टम इन्स्टल गर्ने बित्तिकै यी समस्या समाधान हुन्छ ।
भनेपछि यो बोर्डको नभएर ब्रोकर एशोशियसनको काम हो ?
– हो । हामीले यसबारेमा विज्ञप्ति पनि निकालेका थियौं । त्यसपछि ब्रोकरका पदाधिकारीसहित हामी छलफलमा बसेको छौं । त्यस छलफलमा बैंकिङ इन्ट्रीग्रेशन, ट्रेड म्यानेजमेन्ट र जोखिम व्यवस्थापनको लागि तपाईहरुको कन्सेप्ट पेपर ल्याउनु भनेको छौं । नेप्सेसँग एपीआई कार्यविधि पनि मागेका छौं । जुन नेप्सेले हामीलाई दिइसकेको छ । सीडीएससीसँग इम्प्रुभमेन्ट गर्ने इन्सट्रक्सन पनि दिएका छौंं । जसअनुसार सीडीएससीले काम सुरु गरिसकेको छ ।
धेरै काम अगाडि बढिसकेको छ । जसकारण दाेस्रो बजारको भविष्य असाध्यै राम्रो छ । बजार पुँजीकरण पोहोर सालको १६ खर्बबाट अहिले ३४ खर्ब नघिसक्यो । त्यसैगरी नेप्से १२६३ बाट नेप्सेले २५०० नाघिसकेको छ । जीडीपीको आधारमा पोहोर साल बजार पुँजीकरण ४२ प्रतिशत मात्रै थियो अहिले बढेर ८२ प्रतिशत भएको छ । दिनभरिमा पोहोर साल यसै समयमा दैनिक ३९ करोडदेखि ४५ करोडको कारोबार हुने गर्दथ्यो । तर अहिले औसतमा दैनिक १० अर्बको कारोबार भइरहेको छ । बजारमा पटकपटक सर्किट ब्रेक लागेको छ ।
अरु सबै आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुँदा पनि अहिले शेयरबजारले अर्थतन्त्र धानेको छ । सरकारको राजश्व समयमा नउठ्ने र समयमा खर्च नहुने अवस्थामा पनि धितोपत्र बजार चलायमान भइरहेको छ । हामीले एकवर्षको बीचमा ६ वटा नियमावली संशोधन गरेको छौं र ऐन, कानुनलाई समयअनुकुल बनाएका छौँ । धितोपत्र व्यवसायी नियामावली २०६४, धितोपत्र व्यवसायी दलाल व्यापारी बजार निर्माता नियामावली २०६४, धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियामावली, विशिष्टिकृत लगानी कोष नियामावली, सामुहिक लगानी कोष विनियमावली, धितोपत्र राफसाफ फर्स्योट बिनियमावली लगायत छ वटा नियमवाली संसोधन गरेका छौं ।
त्यसैगरी अरु नीतिगत कुरा हेर्ने हो भने रियल सेक्टरका कम्पनीहरु बजारमा आउन् भनेर बुक बिल्डिङ निर्देशिका तयार गर्यौं । जसका लागि ४ दर्जन कम्पनीको सुची नै बनाएका छौं । जसका कारण मानिसहरु, कम्पनीको शेयर निष्कासन प्रक्रियामा सहभागी हुन आउन थालिसकेका छन् । अब रियल सेक्टरका कम्पनीको प्राथमिक शेयर बजारमा आउँछ । ब्रोकरले दिने मार्जिन सुविधा ७० प्रतिशत दिन पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैगरी इ–केवाईसी लागु गर्नका लागि डिजिटलाइजेसन गर्नका लागि काम गरेका छौं । बोरे प्रवृतिलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नको लागि र इ–केवाईसी लागु गर्न सीडीएससीलाई भनेका छौ ।
अहिले पनि एउटै मानिसले एउटै इमेल, फोन नं.देखि हस्ताक्षरसम्म आफ्नै गरेर कम्तिमा पनि १५० देखि २०० माथिका डीम्याट खाताहरुबाट कारोबार गराउने गरेको पाइएको छ । बोरे डिम्याटलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
डिजिटल केवाईसीको कार्यविधि बनाएर लागु गर्नको लागि सीडीएससीलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । सीडीएससीले सिस्टम बनाएपछि इलेक्ट्रोनिक नागरिकतामार्फत सयौंको संख्यामा एकै मानिसले कारोबार गर्ने कुरा नियन्त्रण हुन्छ । मानिस आफैँ अगाडी उपस्थित भएर ल्याप्चे लगाएर सर्टिफाई भएपछि मात्रै शेयर भर्न पाइन्छ । त्यसपछि आफैं नियन्त्रणमा आउँछ । त्यस्तै आईसिटी लागु हुँदैछ ।
यो कहिलेसम्म लागु हुन्छ ?
– सीडीएसीले सफ्वेयर बनाउने काम सुरु गरिरहेको छ । कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर सफ्वेयर बनेपछि करिब ६ महिना भित्र लागु हुन्छ । यस बाहेकका धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएका संस्थाहरुलाई बोर्डसँगको कानुनी प्रक्रियाहरु पुरा गर्न र विवरण बुझाउनको लागि कागजपत्र हातमा लिएर आउने प्रचलनलाई अन्त्य गर्न लागेका छौं ।
त्यसका लागि इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ एण्ड रिट्रायवल सिस्टम (ईईआरआरएस) लागु गरेका छौं । अहिले हामी समानान्तर प्रयोगमा छौं । यो सिस्टम राम्रोसँग चलेपछि हामी सबै कुराहरु अनलाईनमार्फत नै हुने बनाउने छौ । कसैले पनि डकुमेन्ट हातमा बोकेर आउनु नपर्ने बनाउने छौं । त्यस्तै, ब्रोकर कमिशन पनि ६० प्रतिशत घटाइसकेका छौं ।
जो मानिस आज नै धेरै शेयर किन्ने अनि आज नै धेरै शेयर बेच्ने एवंरितले सँधै शेयर किनबेच गरिरहने मानिसलाई तरलताले कुनै दिन सताउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उसले ब्रोकरसँग भएको आफ्नो व्यालेन्स माग्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो रकम ब्रोकरले मागेको २४ घण्टा भित्र दिएन भने हामीले कारवाही गछौं भनेका हौं ।
धितोपत्रले लिने कमिशन पनि महंगो भयो भन्ने कुरा छ नि ? कमिशनवापत कोषमा जम्मा भएको पैसा कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ ?
– धितोपत्रले लिने ०.०२ प्रतिशत कमिशन महंगो होइन । धितोपत्र बोर्डको आम्दानीको स्रोत अरु केही पनि छैन । सरकारले कुनै बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । बोर्डको घर, जग्गा–जमीन, न त केही सम्पत्ति नै छ । न त बोर्डको व्यालेन्ससिट नै राम्रो छ । आम्दानी नभएपछि व्यालेन्ससीट कसरी राम्रो होस् । बीमा कम्पनीले १ प्रतिशत कमिशन लिन्छ । वर्षको ३ अर्ब भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । हाम्रो जम्माजम्मी आम्दानी वर्षभरिको २० करोड हो । त्यसमा खर्च कटाएर १० करोड पनि बच्दैन । राज्यले बजेट दिँदैन ।
यो संस्थाको विकासको लागि जति हामी कमिशन लिन्छाैं, त्यो अहिलेको सिनारियोमा पर्याप्त छैन । कारोबार बढ्यो राम्रो भयो भने पछिका दिनमा घटाउन सकिएला तर अहिलेको अवस्थामा त बढाउने हो कि जस्तो देखिन्छ । हिसाब हेर्नुहुन्छ भने लगानीकर्ताबाट ब्रोकरले १०० रुपैयाँ कमिशन लियो भने ८० रुपैयाँ आफुले राख्छ । बीस रुपैयाँ नेप्सेलाई दिन्छ । त्यो नेप्सेलाई दिएको बीस रुपैयाँबाट १ रुपैयाँ ७५ पैसा मात्र बोर्डलाई आउने हो । कमिशन त्यही हो । यो मानिसहरुको बुझाइमा भएको कमजोरी हो । त्यसबाहेक अब हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको व्यवस्था गर्नेबारे सोचेका छौं ।
अब कमोडीटी मार्केटलाई पनि रेगुलेट गर्ने तयारीमा छौं । संसारमा जतिपनि शेयरबजारमा भोलुममा कारोबार हुन्छ त्यो भन्दा धेरै ठूलो भोलुममा कमोडी बजारमा कारोबार हुन्छ । त्यसकारण हामीले त्यसलाई बजारमा ल्याउनु नै पर्छ ।
त्यस्तै हामीले टी प्लस टु कार्यविधि ल्याएका छौं । अनुगमन सुपरीवेक्षण बढाएका छौं । अलिकति फटाइं गर्ने संस्थाहरुलाई कारबाही गरेका छौं । बिशालबजारदेखि नाम चलेका सरकारी कम्पनीहरुलाइ पनि हामीले कारबाही गरेका छौं । ब्रोकरहरुलाई पनि कारबाही गरेका छौं । प्रोक्सीको व्यवस्था हटाएर ई–भोटिङको व्यवस्था गर्नको लागि सीडीएससीलाई काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छौं ।
स्टक डिलरको लाइसेन्स दिइसकेका छौं । जसले बजारमा काम सुरु गरिसकेको छ । मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई इजाजत दिने र मर्ज गराउने काम गरिरहेका छौं । त्यसकारण एकवर्षको छोटो अवधिमा धेरै राम्रा कामहरु भईसकेका छन् । कर्मचारीहरुको अभाव थियो । यसको लागि हामीले कर्मचारी बढाउने व्यवस्था सुरु गरिसकेका छौं । हामीले गर्न सक्ने जति क्षमता थियाे, त्यो काम हामीले गरेको छौं । कोरोनाको कारण ४ महिना हामीले केही काम नगरे पनि बाँकी रहेको ८ महिनामा हामीले धेरै राम्रा कामहरु गरेका छौं ।
अहिले टी प्लस टु लागु भयो तर अझैपनि व्यवहारिक रुपमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई बिक्री गरेको शेयरवापतको रकम दिन हप्तौ दिन लगाउने, डिम्याट खातामा हाल्न पनि ५/७ दिन लगाउने परम्परा छ ?
– टी प्लस टु भनेको व्यवहारिक होस् भनेर नै ल्याइएको हो । त्यसरी ५/७ दिन लगाउनै मिल्दैन भनेर कडाइका साथ निर्देशन दिइसकेका छौं । यहाँ बुझाइमा अलिकति फरक पनि देखिएको छ । जस्तो एकजना मानिस कहिले कहीँ शेयर किन्ने र बेच्ने गरिरहेको छ भने त्यस कुरामा धेरै समस्या देखिएको छैन् । ऊ शेयर किनबेच गरिरहने व्यापारी होइन भने टी प्लस टु सम्म कारोबार राफसाफ भइसकेको हुन्छ ।
तर, जो मानिस आज नै धेरै शेयर किन्ने अनि आज नै धेरै शेयर बेच्ने एवंरितले सँधै शेयर किनबेच गरिरहने मानिसलाई तरलताले कुनै दिन सताउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उसले ब्रोकरसँग भएको आफ्नो व्यालेन्स माग्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो रकम ब्रोकरले मागेको २४ घण्टा भित्र दिएन भने हामीले कारवाही गछौं भनेका हौं ।
अहिले संचालनमा रहेका ५० वटा ब्रोकर मध्ये सेन्टल« बिओआईडी बनाएर जुन कुनैबाट कारोबार गर्नसक्ने अवस्था बनाउन सकिँदैन र ?
– यो कुरामा अलिकति समस्या छ । यो विश्वभरी कही पनि हुँदैन् । किनभने मैले कुनै कम्पनीको शेयर बेच्ने भएँ । त्यो शेयरको पैसा दिने ग्यारेन्टी ब्रोकरले लिएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी त्यो शेयर जसले किन्यो नी, त्यो शेयरको पैसा असुल गर्ने ग्यारेन्टी पनि ब्रोकरले नै लिनुपर्छ । एउटाले एक ठाउँबाट किन्ने अर्को ठाउँबाट बेच्ने अनि ब्रोकरै पिच्छे शेयर किन्दै बेच्दै हिँड्ने हो भने त्यसको रकम तिर्ने र उठाउने जिम्मा कुन चाहीँ ब्रोकरले लिन ?
ब्रोकरको कन्ट्रोल भएन भने कसरी सिस्टम चल्छ । त्यसकारण पहिला लगानीकर्ताको लिङ्केज ब्रोकरकोमा हुन्छ । ब्रोकरमार्फत नेप्सेमा जाने हो । ब्रोकरबाट नै सीडीएससीकोमा जाने हो । त्यसकारण लगानीकर्ता पहिला ब्रोकरकोमा त जानु नै पर्छ ।
उदाहरण हेरौं, एकजनाले धनगढीबाट काठमाडौंमा रहेको आफ्नो कारोबार भएको ब्रोकरलाई शेयर बेच्न आदेश दियो । शेयर बेच्नको लागि ब्रोकरले प्रोसेस गरिदिन्छ । प्रोसेस गरेर म्याचिङ भएपछि शेयर सेटलमेन्टको लागि ईडीआईएस गरिदिनु पर्यो । कतिपय लगानीकर्ताले ईडीआईएस नै गर्दैनन् । ईडिआईएस गरेन भने त ब्रोकरलाई समस्या पर्छ । बेच्ने मान्छेले शेयर बेच्ने तर ईडीआईएस नगर्ने, किन्ने मान्छेले किन्ने आदेश दिने तर शेयर किनेको पैसा ब्रोकरलाई नदिने, मोवाइल स्वीच अफ गरेर बस्यो भने ? बैंक ग्यारेन्टी छैन् ।
नबुझी लेख्ने, आधा मात्र लेख्ने र पत्रकारहरुले पनि नबुझीकन गलत समाचार दिएका कारण हामीले विज्ञप्ति नै निकालेर स्पष्ट पारेका हौं । कुरा बुझाईमा फरक परेको हो । ससाना लगानीकर्ताहरुले नबुझेपनि लगानीकर्ता संस्थाका नेताजीहरु पनि त्यही समाचार वा आधा खबर कै आधारमा कन्फर्म नै नगरी गाली गर्दै हिड्छन् । नेताजीहरुको हालत त यस्तो छ भने आम लगानीकर्ताको हालत के होला ? म त छक्क पर्छु ।
ब्रोकरको मार्जिन २५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसरी हरेक कुराको सेटलमेन्ट गराउन र यस्ता समस्या सेटलमेन्ट गर्नको लागि ब्रोकर चाहिन्छ । यदि कारोबार गरिरहेको ब्रोकर कसैलाई चित्त बुझेन भने अर्को ब्रोकरकहाँ जान सक्छ । त्यसको लागि एक दिन मात्र पर्खिनु पर्छ ।
क्लोजआउटमा परेमा जरिवानाको नियम के छ ?
– क्लोजआउट परेमा २० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । जति पैसाको शेयर कारोबारमा क्लोजआउट परेको हो त्यसमा २० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ ।
अटोमेटीक शेयर कारोबार गरिने सिस्टम बनाउन किन सकिएको छैन ?
– अटोमेटीक शेयर कारोबार गर्ने सिस्टम बनाउन बोर्ड लागिरहेको छ । जसबारे हामीले माथि नै टीएमएस र सीडीएससीका बारेमा चर्चा गरेका छौ ।
नेप्सेमा सुचीकृत कम्पनीहरु माथि कारवाही गर्ने र कारोबार रोक्का गर्ने काम गरिरहनु भएको छ । यसले लगानीकर्तामा नकारात्मक असर पर्दैन र ?
– हामीले लगानीकर्ताको हितमा नै काम गरेका हौं । कारोबार रोक्का गरेर न त हामी कसैलाई पनि फाइदा छैन । जुन–जुन संगठित संस्थाले समयमा विवरणहरु बुझाउँदैनन् त्यस्ता संस्थालाई हामीले कारबाही गरेका छौ । केही दिन अघि मात्रै नेप्सेले बिशाल बजार कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको कारोबार रोक्का गरेको छ । अरु कारोबारमा रहेका संस्थाहरु पनि अनुशासनमा बस्नु पर्छ र अनुशासनमा नबस्ने, समयमा विवरण प्रकाशन नगर्ने, विवरण नबुझाउने संस्थालाई हामी कारबाही गर्दै जान्छौं । जसले बजारप्रतिको धारण सकारात्मक बनाउँदै जान्छ ।
२५ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको चर्चाले बजारमा ठुलै असर पर्यो ? यहाँहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर स्पष्ट पार्नु पर्यो, खासमा भएको के हो ?
-यो सामाजिक संञ्जालको विकृति हो । नबुझी लेख्ने, आधा मात्र लेख्ने र पत्रकारहरुले पनि नबुझीकन गलत समाचार दिएका कारण हामीले विज्ञप्ति नै निकालेर स्पष्ट पारेका हौं । कुरा बुझाईमा फरक परेको हो । ससाना लगानीकर्ताहरुले नबुझेपनि लगानीकर्ता संस्थाका नेताजीहरु पनि त्यही समाचार वा आधा खबर कै आधारमा कन्फर्म नै नगरी गाली गर्दै हिड्छन् ।
बैंक वित्तीय संस्थाको आफ्नै काम र दायरा छ । उनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने हो भने ऋण दिने, डिपोजिट लिने र बैंकिङ कारोबारको काम कसले गर्ने त ?
नेताजीहरुको हालत त यस्तो छ भने आम लगानीकर्ताको हालत के होला ? म त छक्क पर्छु । वास्तवमा हामीले भन्न खोजेको कुरालाई भ्रमपूर्ण तरिकाले प्रचार गरिएको मात्रै हो । शेयरबजार भनेको अति नै संवेदनशील क्षेत्र हो । मानिसले सानो सुचनाको आधारमा तत्कालै आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्छ । त्यसकारण भ्रमपूर्ण सूचनालाई मिडियाले पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ ।
तपाईंको विचारमा धितोपत्र बजार उत्पादनमुलक क्षेत्र हो कि अनुत्पादक क्षेत्र हो ?
-धितोपत्र बजार अनुत्पादक क्षेत्र हुँदै होइन । यो उत्पादक क्षेत्र हो । प्राथमिक बजार भनेको विभिन्न उद्योग, कम्पनी, संस्थाले पूँजी संकलन गर्ने ठाउँ हो । पूँजी संकलन गरेर उद्योग, संस्था चलाउने हो । त्यसो भए बैंकले जतिपनि कर्जा प्रवाह गर्छ के त्यो सबै अनुत्पादक हुन्छ र ? त्यो पैसा उद्योग, व्यापार तथा उत्पादनशील काममा प्रयोग भएको हुन्छ । उत्पादनको काममा पैसा प्रयोग भएको अवस्थामा धितोपत्र बजार कसरी अनुत्पादक हुन सक्छ ?
अब १० कित्ते होइन ५० कित्ते बनाउनु पर्छ भन्नुभएको छ । यो कहिले लागु हुन्छ ?
-यो एउटा अप्सन मात्रै हो । समय सापेक्ष निर्णय गर्दै जानुपर्छ । जहिलेसम्म सबै लगानी कर्ताले १० कित्ता पाउने अवस्था हुन्छ, त्यसबेलासम्म दिनु नै राम्रो हो । यसले वाइड कभरेज हुन्छ । जब १० कित्ता कै लागि भाग्यशाली घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यसबेला १० कित्ताको औचित्य के भयो र ? १० कित्ताको आफ्नै समस्या छ । १० कित्ता किन्नको लागि आफ्नै समस्या छ । १० कित्ता किन्नको लागि लगानी हिसाब गर्ने हो भने मानिस आकर्षित हुनसक्ने अवस्था छैन् ।
अब प्राइभेट ईक्वीटी भेन्चर क्यापिटलहरुलाई इजाजत दिएर छिट्टै बजारमा ल्याउने तयारीमा छौं । कुनैपनि प्रोजेक्टहरु संचालन हुने भयो भने त्यो प्रोजेक्टलाई ईक्वीटी वा कर्जा फाइनान्सिङ गर्ने काम तिनले गर्छन् । संसारमा जति पनि उद्योग व्यवसायको विकास भएको छ । यस्तै भेन्चर क्यापिटलका कारणले भएको हो ।
डिम्याट खाता खोल, बैंक खाता खोल, इन्टरनेट जोड, युजर आईडी पासवर्ड लिनु पर्यो । यो सबै हिसाब गर्ने हो भने १०० रुपैयाँको दरले १० कित्ता शेयर लिनु फाइदा छ र ? त्यसो भएको हुँदा शेयरबजारमा कारोबार गर्दा फाइदा हुन, आकर्षित हुनको लागि कमसेकम ५० कित्ता भयो भने कारोबार गर्नेलाई सजिलो हुन्छ । त्यसको लागी हामीले अहिले त होइन अलिपछिको लागि चाहिँ सोच्नु पर्छ ।
नेपाल लाइफले एक कित्तालाई दुई कित्तामा कन्भर्ट गर्ने प्रक्रियाको बारेमा चर्चा चलाएको छ । यसबारे के भन्नु हुन्छ ? भारतमा त अझ १० रुपैयाँ प्रतिकित्ता चलन छ ?
-हाम्रोमा त्यो सिस्टम छैन् तर त्यसप्रकारको सिस्टम चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसको लागि विभिन्न ऐन, कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ । तर बिद्यमान कम्पनी ऐनमा चाहिँ ५० रुपौयाँसम्मको शेयर जारी गर्न पाइन्छ भन्ने छ । धितोपत्र बोर्डको नियमावलीमा न्युनतम प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको शेयर हुनुपर्छ भन्ने छ ।
अहिले हाम्रो बजारमा एउटै शेयरको मुल्य २० हजारसम्म पुग्यो । कसैलाई एउटा शेयर किन्नु पर्यो भने धेरैपटक सोच्नु पर्ने हुन्छ । शेयरमा लगानी गर्ने कुरामा लगानीकर्तालाई धेरैपटक सोच्नु पर्ने हुन्छ । त्यही २० हजारको शेयर १० रुपैयाँको हुन्थ्यो भने दुई हजार रुपैयाँको हुन्थ्यो । अथवा, ५० रुपौयाँको थियो भने १० हजार रुपैयाँ हुन्थ्यो । मानिसलाई २० हजार भन्दा १० हजार लगानी गर्न ठिक लाग्छ । १० हजार भन्दा २ हजार लगानी गर्न ठीक लाग्छ । जसले गर्दा बजारमा ट्रेडिङ भोलुम बढ्छ । फ्रिक्वेयन्सी बढ्छ । यदि त्यस्तो हिसाबले कोही हामीकहाँ आए भने विद्यमान कानुनको अधिन र परिधि भत्र रहेर हामी गर्न सक्छौ ।
हाल ५० वटा ब्रोकरहरु संचालनमा छन् । यसबाहेक बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पनि ब्रोकर लाइसेन्स मागिरहेका छन् । यसबारे के हुँदैछ ?
-५० वटा ब्रोकरले मात्रै बजार संचालन गर्न गाह्रो छ । कारोबार भोलुम बढेको छ । कारोबारको क्षेत्र र दायर पनि बढाउनु छ । त्यसकारण ब्रोकरहरु थप्नु नै पर्छ । जहाँसम्म बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा छ, त्यो त्यति व्यवहारिक छैन । बैंक वित्तीय संस्थाको आफ्नै काम र दायरा छ । उनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने हो भने ऋण दिने, डिपोजिट लिने र बैंकिङ कारोबारको काम कसले गर्ने त ?
सरकारी ऋणपत्रहरु दोस्रो बजारमा कारोबार हुन गाह्रो भएको छ । त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर सबै सरकारी ऋणपत्रको डिम्याट गर्ने र त्यसलाई पनि दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रदेश–प्रदेशका लगानीकर्ताहरुले हरेक प्रदेशमा ब्रोकर कार्यालय खोल्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेशबाट नै ब्रोकर खोल्नुको कारण पनि बताएका छन् । उनीहरुले सबै कुरा केन्द्रीकृत गरेर अबको समयमा सम्भव नभएको बताएका छन् । हामी हाम्रो स्रोत, साधन लगाउने, त्यसको आम्दानी पनि हाम्रो क्षेत्रमा नै आउनु पर्यो भन्ने माग छ । बैंकको कारोबार पनि केन्द्रिकृत हुने, बोर्डको पनि केन्द्रिकृत हुने हो भने प्रदेशको अर्थ नै नहुने भयो । बैंकलाई ब्रोकर लाईसन्स दिनु भन्दा केन्द्रका साथसाथै क्षेत्रगत हिसाबमा पनि ब्रोकरहरुको संख्या बढाउने तयारीमा छौं ।
आईपीओ निष्काशन गर्ने ठूला तथा साना पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ ?
कुनै ठुला कम्पनीहरु हुन्छन् । कुनै साना कम्पनी हुन्छन् । ससाना कम्पनी जसलाई एसएमई भनिन्छ । साना कम्पनीको कारोवार गर्ने छुट्टै सिस्टम हुन्छ । ठूला कम्पनीहरुको मुख्य इन्डेक्स रहेको हुन्छ । यस्ता साना र ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार कसरी व्यवस्थित कारोबार गर्ने भन्नेबारे हामीले अध्ययन गरेका छौं । अध्ययन गर्ने काम सकिएको छ । कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । प्रक्रिया सुरु गरेका छौं, केही समय लाग्छ ।
धितोपत्र बोर्डका भावी योजना के छन् ?
म धितोपत्र आउँदा जे जस्ता कुरा गर्छु भनेर आएको थिएँ, त्यही कुरालाई विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजाने हो । संस्थागत विकास र संस्थागत क्षमता अभिवद्धि गर्दै लैजाने हो । हामीकहाँ मर्चेन्ट बैंक, स्टक डिलर पहिले थिएन हामीले हालै अनुमति दियौं ।
त्यस्तै कमोडिटी मार्केटको पनि प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा छौं । पहिला रेगुलेटेड थिएनन्, अब कमोडीटी मार्केटलाई पनि रेगुलेट गर्ने तयारीमा छौं । संसारमा जतिपनि शेयरबजारमा भोलुममा कारोबार हुन्छ त्यो भन्दा धेरै ठूलो भोलुममा कमोडी बजारमा कारोबार हुन्छ । त्यसकारण हामीले त्यसलाई बजारमा ल्याउनु नै पर्छ ।
त्यस्तै गरी हामी नयाँ–नयाँ प्रडक्टहरु ल्याउने तयारीमा छौं । इक्वीटी डेरिभेटीभको लागि अध्ययन कार्य समाप्त भएको छ । त्यसको लागि नियम बनाउँदै छौ । नियम बनाएपछि त्यो पनि संचालनमा आउँछ । मर्चेन्ट बैंकलाई नयाँ प्रडक्टहरु विकास गर्न निर्देशन दिएका छौं ।उनीहरुको पनि नयाँ प्रोडक्टहरु आउँछ ।
त्यसैगरी सरकारी ऋणपत्रहरु दोस्रो बजारमा कारोबार हुन गाह्रो भएको छ । त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर सबै सरकारी ऋणपत्रको डिम्याट गर्ने र त्यसलाई पनि दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । झण्डै एकवर्ष भयाे, त्यस कामको लागि राष्ट्र बैंक, मन्त्रालय र बोर्डको संयुक्त प्रयास जारी छ ।
डिम्याट एकाउण्टको संख्या ३० लाख पुग्यो, दुई सातामा २ लाखले नयाँ डिम्याट खाता खोले २१ घण्टा पहिले
शुक्रबारदेखि ५९ लाख कित्ता आईपीओमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने २२ घण्टा पहिले
बहुविवाह आरोपितलाई एक वर्ष कैद फैसला १८ घण्टा पहिले
बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोभिड अस्पतालको स्तरोन्नति ४ महिना पहिले
सुनको भाउ निरन्तर ओरालो, चाँदीको मूल्यमा पनि गिरावट ५ महिना पहिले